Nendlela Phinda kusulwe Amafayela kusuka iPad
Wake kusula amafayela akho iPad noma walahlekelwa idatha yakho? Lezi kungekho bin recycle on iPad yakho, asikwazi kuchithwe Susa. Kodwa singa sebenzisa software an iPad ukuthola ukuze asisize.
iPad Data Recovery isofthiwe iyithuluzi third-party, ke kusenza sikwazi ukusukumela phezulu scan iPad ngqo futhi alulame isusiwe Amanothi, izithombe, imiqophi, IKHAYA, othintana, ikhalenda nokunye, kusebenza kahle iPad 1, iPad 2, the New iPad ne-iPad 4, ngisho iPad mini. Ungakhetha alulame yonke idatha elahlekile noma nje alulame olulodwa uhlobo lwefayela oyifunayo. Kuphuma kuwe!
Landa MAHHALA Trial version of iPad Data Recovery ngezansi kuqala.
Nendlela Phinda kusulwe Files kusuka iPad 1/2/3/4/Mini ngqo ?
Step 1: Xhuma iPad yakho kukhompyutha futhi scan
A) For iPhone iPad iPad mini, iPad ne Retina ukuveza, I iPad entsha, iPad 2 abasebenzisi (iPad 1 umsebenzisi weqa lokhu ngokulandelayo):
Ngemuva ukufaka iPad alulame idatha, uhlelo bese uxhuma iPad yakho computer. Uzothola lesi ukusebenzisana ngezansi. Chofoza enkulu “Qala Scan” Inkinobho, inqubo ukuskena sizoqala ngokushesha.
B) Ukuze-iPad 1 umsebenzisi:
Uma usebenzisa iPad 1, lolu hlelo luyoba akucele ukulanda ipulaki-in kuqala lapho wena ukuxhuma iPad yakho computer. Futhi emva ukulanda, kudingeka uthole idivayisi yakho zibe mode DFU ke isofthiwe angakwazi okujulile scan idivayisi yakho. Lolu hlelo uyofundisa kanjani ukukwenza lokhu:
1) Bamba iPad yakho bese uchofoza “Qala” Inkinobho.
2) Ukucindezela “Power” Futhi “Home” izinkinobho ngesikhathi esisodwa for 10 imizuzwana.
3) ukudedela the “Power” Inkinobho, kodwa namanje niqhubeke nibheka “Home” inkinobho ukuze uthole enye i 15 imizuzwana.
Step 2: Hlola umphumela lokuskena bese bakhethe idatha ukuze alulame
Inqubo ukuskena wawuyoba amaminithi ambalwa. Ungahlola kuqala yonke idatha etholakele emva sekugcineni ukuskena. Hlola idatha ofuna, Bese uchofoze “Alulame” ukuzilondoloza zonke kukhompyutha yakho.
Inothi: Idatha ezilapha ihlanganisa wedatha esusiwe nama yibo namanje ku-iPad yakho. Ungakwazi sehla inkinobho ukuze sibonise ayithemu kusulwe kuphela.
Posted on September 1, 2013 December 26, 2013 Umbhali WillIzigaba iOS Data RecoveryAmathegi software iPad alulame idatha, iPad photo alulame, alulame amafayela isusiwe iPad
Langaphambilini post Previous: Indlela ukuthola izithombe kusuka ihlelwe yememori card
Next post Next: Indlela ukusekela iPhone yakho, iPad, iPod Touch ngekusebentisa iTunes